Ọmụmụ Semalt: SEO Dịka Atụmatụ Ahịa Mgbasa Ozi
Ụlọ ahịa na-achọ ịchọta ịntanetị. Ma ọ bụghị, ndị ahịa gagaa na ebe nrụọrụ weebụ ha site n'amaghị ama ma ọ bụ ịmata ịmata ihe. Aha e ji ụlọ ọrụ, aha ya na ngwaahịa ya na-enye ozi nwere ike ịkọnye ndị ahịa maka njirimara. Ozi yiri nke a bụ ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-ezipụta ozi nke na-emepụta weebụ nkeazụmahịa - iowa long term care insurance premiums. Ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma nwere ozi nke dị mfe ịhọrọ, ọtụtụ ndị ahịa nwere ike ịchọta ha na obere mgbalị.
Ịntanetị nwere ihe karịrị ijeri 13 na nyocha kwa ọnwa. Ntọala nkeNchọpụta Nchọpụta Nchọpụta (SEO) nke bụ isi ebe nrụọrụ weebụ nke dị mfe dị na-arụ ọrụ dị ka atụmatụ ọnụọgụ abụọ dijitalụ maka onlineazụmahịa.
Site na SEO, azụmahịa ahụ nwere ike ịchụpụ ndị ahịa ya na ebe nrụọrụ weebụ ya iji chọpụta ihesaịtị ahụ nyeere ha ebe ahụ site n'ịba ụba ego ha nwetara. Enwere ike ime nke a mgbe ụlọ ọrụ ahụ nwere ọkwa dị elu mgbe niileNbudata Nchọta Mmasị Search. Mgbasa mgbasa ozi na Pay Per Click bụ ụfọdụ n'ime ụzọ kachasị mma a tụrụ aro.
Andrew Dyhan, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, na-enye ihe ndị dị mkpa nke atụmatụ ahịa ahịa dijitalụ dị iche iche nke ọ bụla chọrọ ịntanetị.
Olee otú SEO na-arụ ọrụ
SEO na - eji engines na - achọ ihe bụ nzube ya bụ igwu, nyochaa, chekwaa ndetuna iji mee ihe iji chekwaa iji algọridim dị ka ndị a.
1. Okwu Mkpa:
Ikwughachi otu isiokwu na-eme ka njirimara nke ibe weebụ ahụ dịkwuo mkpa.
Ụlọ ọrụ ọchụchọ na-eji usoro ihe omume HTML eme ihe dị ka ndị Meta na-enyenyochaa afọ ojuju.
3. Akwukwo Igbo:
Afọ ojuju nke na-eji okwu ndị dị mkpa na-arịọ ndị ọzọ ma kpọga ha na saịtị ahụ.
Hyperlinks na weebụsaịtị ndị ọzọ na-edegharị na weebụsaịtị nyere ọkwa dị elu nkesaịtị maka okporo ụzọ.
Ozi gbasara indexing, crawling, Algorithms Search Engine, na weghachite nye anghọta kariri nke SEO usoro.
Crawlers ma ọ bụ Spiders bụ ngwanrọ na-eme nchọgharị na netwọk maka ndepụta makanyefee ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ozi ahụ site na engines ọchụchọ. Onye na-agba ụra adịghị achọ maka mmelite banyere ịntanetịọdịnaya na kwa ụbọchị, ma ọ na-edebe ihe ncheta na ndepụta na achọpụtara, ebudata na ebe a na-eleta maka nhazi ngwa ngwa site na engines ọchụchọ.
Spider na-emepụta nchekwa data nke ibe nke ọdịnaya ahụ. Ihe ederede nken'ụzọ bụ isi, databases na-enye ozi banyere weebụsaịtị na ibe weebụ nke ọchụchọ nyocha. Weghachite ọdịnaya nke ihentụgharị okwu bụ site na isiokwu na njikọ ndị yiri ya. SEO ga-abụ eziokwu ma ọ bụrụ na engine engine kwesịrị ịghọta ebe nrụọrụ weebụ.
Algorithms Search Engine
Algorithms Search Engine bụ nke setịpụrụ ụdị nchịkọta na usoro dị iche iche nke kọwaaMmetụta nke ibe weebụ. Ha nwere ikike ịchọpụta ezigbo akwụkwọ ma ọ bụ ma ọ bụrụ na web ọdịnaya nwere ozi bara uru dịka onye ọrụ ahụ chọrọ.
Oge ikpeazụ nke SEO nyochaa weebụ bụ usoro mgbagwoju anyagụnyere nghọta nke ọdịnaya achọrọ na iji ya tụnyere njigide na sava dị mkpa. Na njedebe, search engine retrievesndepụta nke akwụkwọ na-ejikọta isiokwu na eriri eji.
Ya mere, iji SEO eme ihe, kwadoo inweta ozi nke otuweebụsaịtị na nchọta nke nchọta maka nbudata ya site na njuputa inyocha. Usoro ahia ahia SEO bu ugwo nke oma dika o na enyeọhụhụ nke azụmahịa na-eme e-azụmahịa site na ịmepụta ọdịnaya nke ibe weebụ maka engines na-achọ.